အိန္ဒိယနိုင်ငံ လေထုတွင်း သန့်စင်ရန်နှင့် ဖုန်သိပ်စေရန် မီးသတ်သမားများက တိုက်မြင့်များပေါ်မ? - Yangon Media Group
နယူးဒေလီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လေထုညစ် ညမ်းမှုများလျှော့ချနိုင်ရန်နှင့် ဖုန်သိပ်စေရန်အတွက် မြို့ကြီးများရှိ အထပ်မြင့်တိုက်ကြီးများအပေါ်မှ နေ၍ မြေပြင်သို့ရေများပက်ဖျန်း ပေးရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အား ညွှန် ကြားထားသည်ဟု အိန္ဒိယမီးသတ် တပ်ဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက်က သတင်း ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ သည် လေထုအတွင်းဆာလ်ဖာဒိုင် အောက်ဆိုက်၊ ကာဗွန်မိုနောက် ဆိုက်နဲ့ နိုင်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်များဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လေထုအညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ တိုင်းတာမှုများအရသိရှိရသည်။ ယင်းလေထုအတွင်းအမှုန်ပါဝင်မှု Pm ၂ ဒသမ ၅ ရှိနေပြီး၊ ယင်း ပမာဏသည် လူတို့အား အသက် ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ နယူးဒေလီမြို့သား များသည် အပြင်ထွက်အပြေး လမ်းလျှောက်သော၊ လေ့ကျင့်ခန်း များပြုလုပ်ခြင်းများစွာကြောင့် လမ်းထွက်ပါက မျက်နှာဖုံးများ တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားရန် မေတ္တာ ရပ်ခံထားသည်။ အစိုးရသည် ၁ဝ နှစ်ကျော်သက် တမ်းရှိသောကား များတွင် ဒီဇယ်ဆီများသုံး၍ မောင်းနှင်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပြီး လည်းဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆဲ တိုက်တာအဆောက် အအုံများ တွင် လမ်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ ဖုန်မှုန့်၊ အင်္ဂတေမှုန့်များ မကျစေ ရန်စီစဉ်ထားရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
”နယူးဒေလီမှာကားတွေက များပြားတော့ ဖုန်နဲ့မီးခိုးတွေထွက် တာများတာပေါ့။ ထွက်သမျှညစ် ညမ်းမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အ ဆုတ်ထဲ အကုန်ရောက်သလိုဖြစ် နေရတယ်”ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲအရာ ရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ အွမ်ပရာဇ်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ လေထုထဲ၌ ယာဉ်များမှထွက်ရှိ သော ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ် ငွေ့များ၊ စက်ရုံများမှ ကျောက်မီး သွေးညှော်နံ့များ၊ သီးနှံမီးရှို့မီး လောင်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော ညှော်နံ့များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့် အပြင် ဘာသာရေးပွဲတော်များမှ မီးရှူးမီးပန်းညှော်နံ့များ၊ အမှိုက် ပုံမီးလောင်ရာမှထွက်ပေါ်လာ သော ညှော်နံ့များပါဝင်ကာ လေ ထုညစ်ညမ်းနေရ သည်။
နယူးဒေလီအခြေစိုက်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဌာနမှ အထက်တန်း မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဗီဗတ်ချတ်တို ပတ်ဒ်ယာက ”အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြို့ တော်နယူးဒေလီရဲ့ဆောင်းကာလများဟာ လေထုကြောင့် နှစ်စဉ်ပူ နွေးနေကာ ဆောင်းရာသီနဲ့မတူ ဖြစ်နေရတယ်”ဟု ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။
အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ ချည်နှောင်ထားတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဘရက်ဒလေကူးပါးနဲ့ အီရိန်ရှန့်က်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံေ?
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့အခမ်းအနားနှင့် ကရင်ရိုးရာဂျပ်ခုတ်ပြိုင်ပွဲကို ဘားအံမြို့၌ စည်ကားသိုက်ြ